सिमा लामा Archives - Fonij Korea
स्वास्थ्य, सुरक्षा र स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दुतावासको भनाई दक्षिण कोरियाको सउलस्थित नेपाली राजदुतावासका श्रमसहचारी डिल्लीराम बास्तोलाले कोरियामा ६ महिनाको अवधिमा आत्महत्या र औद्योगिक दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको बताएको छ । गत आइतबार राजदुतावासमा आयोजित पत्रकारहरु सँगको अन्तर्कृया कार्यक्रममा श्रम सहचारी डिल्लीराम बास्तोलाले गत सालको तुलनामा यो वर्ष आत्महत्या र औद्योगिक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको बताए । बास्तोलाका अनुसार सन् २०१८ मा २८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ८ जनाले आत्महत्या तथा ७ जनाको औद्योगिक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यो वर्षको ६फुर्सदमा
सिमा लामा प्रमुख समाचार Comments are Off
दक्षिण कोरियामा हुनु हुने तँपाईलाई सोजुको स्वाद थाहै होला । नेपालमा हुनुहुन्छ भने पनि कोरियाबाट फर्कने आफन्तले कोसेलीका रुपमा हरियो सानो बोतलको मदिरा ल्याइदिएको पिउनु भएको छ भने सोजु हुन सक्छ । नेपालको आइला र कोरियाको सोजु उस्तै हुन् । कोरियन भाषामा सो भनेको आगो अनि जु को अर्थ नशा दिने पेय पदार्थ अर्थात आगो जस्तै कडा मदिरा । कोरिया, जापान र चीनमा निक्कै चलनमा रहेको सोजु कोरियाको स्थानीय उत्पादन हो । पाँच करोड जनसंख्या भएको दक्षिण कोरियामा एक बर्षमा १० करोड भन्दा बढि सोजु विक्रि हुन्छ । यो विश्वकैफुर्सदमा
सिमा लामा बिचार / अनुभूति No Comments »
दक्षिण कोरियामा सोनाम ल्होछार भब्य रुपमा मनाइने : कार्यक्रमको तयारी पुरा
नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाले तामाङहरुको मुख्य चाड सोनाम ल्होछारको अवसरमा गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ । संघको आयोजनामा फेब्रुअरी ४ तारिखमा हुने बृहत सांस्कृतिक एवं सांगीतिक कार्यक्रममा ६ जना चर्चित तामाङ कलाकार नेपालबाट आउने भएका छन् । ल्होछार सांगीतिक कार्यक्रमको लागि नेपालबाट संगीतकार एवं गायक टिका बम्जन, गीतकार एवं गायकद्धय फूलकुमार बम्जन र जीवन बम्जन, संगीतकार एवं गायक जोगलाल लामा, सेलो तथा म्हेन्दोमाया गायिका बिना घले र ताम्बा डम्फूरे धावा वाङ्गेल लामा मोक्तान कोरिया आउने भएका हुन् । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कलाकार व्यवस्थापक संयोजकफुर्सदमा
सिमा लामा जनजाती Comments are Off
दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली संघसंस्थाको कस्तो बित्यो २०१८ ?
नेपाली सम्पर्क समिति र नेपाल बौद्ध परिवार मिलेर यसै बर्ष दक्षिण कोरियाको योङगीन शहरको वाउजङ्सा गुम्बामा नेपालबाट बुद्धको मुर्ति ल्याएर प्रतिस्थापन गर्यो । मुर्तीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सहयोग हुने भनेर धेरै नेपालीले बुद्ध मुर्ती ल्याउनमा सहयोग गरे । एनसीसी र नेपाल बौद्ध परिवारले संयुक्त रुपमा काम गरेको भए पनि बौद्ध परिवारलाई जति क्रेडिट जानु पर्ने त्यो नगएर छाँयामा परेको कुरा चल्यो । नकारात्मक कुरालाई छाड्ने हो भने वाउजङ्सामा बनेको नेपाली बुद्धको मुर्ती दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीको लागि गर्बको बिषय बन्यो । बुद्ध प्रतिस्थापनको चर्चा सेलाउन नपाउदै एनसिसि विवादमा घेरियोफुर्सदमा
सिमा लामा Breaking News, प्रमुख समाचार Comments are Off
गत हप्ता निधन भएका धनसिं तामाङको श्रद्धान्जली सभा कार्यक्रम सम्पन्न
नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरिया र चितवन सम्पर्क समितिले गत बुधबार निधन भएका धनसिं तामाङ (बोम्जन) को श्रद्धान्जली सभा गरेको छ । गत बुधबार तामाङको हृदयघातका कारण मृत्यू भएको थियो । श्रद्धान्जली सभामा नार्गाजुन गुम्बाका लामा प्रमुख उर्गेन लामाले बौद्ध पराम्परा अनुसार पुजापाठ गरेका थिए । कार्यक्रममा मृतक तामाङको श्रीमती र छोरीज्वाइ उपस्थित थिए । ‘विदेशमा अप्ठ्यारो पर्दा यसरी सबै एकै ठाउमा जम्मा भएर सहयोग सान्त्वना दिन सक्नु राम्रो पक्ष हो ।’ नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष मेघप्रसाद वाईवाले भने । ‘अप्ठ्यारो अबस्थामा सबैलाई साथ सहयोग गर्न हामी सधैफुर्सदमा
सिमा लामा Breaking News, जनजाती Comments are Off
कोरियामा तनाब व्यवस्थापन र स्वेच्छिक घर फिर्ती सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न : अबैधानिक रुपमा कोरियामा नबस्न राजदुत सिंहको आग्रह
दक्षिण कोरियामा तनाव व्यवस्थापन, स्वेच्छिक घरफिर्ती एवम् समसामयिक सचेतना विषयमा एकदिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपाली राजदुतावास दक्षिण कोरिया र छनान बैदेशिक रोजगार सहयोग केन्द्रले संयुक्तरुपमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुनजंग बहादुर सिंहले इपिएस लगायत अन्य माध्यमबाट दक्षिण कोरिया आएका नेपालीलाई गैरकानुनी वा शरणार्थी भिसा बनाएर कोरिया नबस्न अनुरोध गरे । उनले कोरियामा गैरकानुनी रुपमा बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एउटा नेपाली गैरकानुनी रुपमा बस्दा अर्को नेपालीको रोजगारी गुम्ने सक्ने बताए । ‘भिसा अवधि सकिएर नेपाल फर्केरफुर्सदमा
आज आइतबार । विहानको ६ बज्दैछ । यति बिहानै निद्राले छोडिसक्यो । कामको दिन अर्लामले पनि उठाउन सक्दैन मलाई । निन्द्रा यस्तो लाग्छ एक मिनेट सुत्दा पनि खुब मज्जा आउँछ । अब काममै ढिला हुन्छ भन्ने भए पछि बल्लतल्ल उठ्छु । आफै आफ्नो मनलाई सान्त्वना दिन्छु धेरै छैन केटी यस्तो जिन्दगी जीउन । यत्रो वर्ष त कटाइस अव ८ महिना त हो । त्यस पछि जिन्दगी भरि नै आफुखुशी उठ्ने । आफुखुशी सुत्ने । क्या रमाइलो । निन्द्रा नै नलागे पछि उठ्नै पर्यो । सिरानीसँगै चार्ज गरिराखेको मोबाइल छ ।फुर्सदमा
सिमा लामा Breaking News, बिचार / अनुभूति Comments are Off
दक्षिण काेरियामा रहेका नेपालीकाे दशै
दशै नेपालीका लागि ठूलो चाड । देशमा हुनेले त आफन्त, मान्यजन र साथीभाइसँग भेटे । आर्शिबाद लिए । रमाइलो गरे । विदेशमा भएका नेपालीका बाध्यता आफ्नै छन् । भनेको बेला छुट्टि मिल्दैन आफ्नो छुट्टि भएको बेला साथीभाइको हुँदैन । रमाइलो गरौ भन्दा भन्दै यस्ता चाडवाड सकिन्छन् । मनमा गाउँघर र आफन्तबाट टाढिनुको पीडा त हुन्छ नै तै पनि कसरी रमाइलो गर्छन् त विदेशमा भएका नेपालीहरु चाडबाडको बेला ? हामीले दक्षिण कोरियामा रहेका केही नेपालीहरुको दशै कसरी बित्यो भनेर कुराकानी गरेका छौ । तारा नारायण राजभण्डारी परदेशमा भए पनि घटस्थापना कैफुर्सदमा
दोङदेमुन गेट नंम्बर तीन
छुसकको विदा हुनु पहिले अलि टाढै घुम्न जाने योजना बन्दैथ्यो । तर यस पटकको छुसक सउल वरि परि नै बित्ने भो । यसो उसो दोङदेमुन जिन्दाबाद । पाँच दिन नै कोठामा नआउने भए पछि लाउने कपडा प्याकिंग शुरु भयो । एकजोर, दुईजोर, तीन जोर हुँदा हुँदा लौ शुटकेश भरियो तर मन भरिएन । केही सामान हाल्न छुट्यो कि ? मनमा यस्तै लाग्दैछ । छुसक बिदा शनिबार भए पनि शुक्रबार काम सकेर लागियो सुवन तिर । सुवनमा साथीभाइ छन् । लेट नाइट लाइफ छ । ठाउँ पनि रमाइलै छ । रातभरीफुर्सदमा
देशको पच्चीस सय र विदेशको एक लाख
सिमा लामा एसएलसी पास गरे पछि प्लस टु पढ्न जनकपुर गएँ । कलेज जनकपुरकै पुरानो र चर्चित राम स्वरुप राम सागर बहुमुखी क्याम्पस थियो । कलेजको समय पछि खासै काम थिएन । फुर्सदिलो थिएँ । मनमा केही न केही त गरौ भन्ने लाग्यो । त्यो बेला देशै भरि रेडियोको वोलवाला थियो । त्यस्तैमा जनकपुरमा रेडियो जनकपुर खुल्यो । एफएमको परिक्षण प्रसारणको समय थियो । गीतहरु धेरै बज्ने । तर बिच बिचमा एउटा आवाजमा कार्यक्रम पनि आउँथ्यो । मेरो ध्यान त्यो आवाजले तान्थ्यो । विस्तारै म रेडियोको फ्यान भएँ ।फुर्सदमा